menino da lenda: Alo Osisi newbie Forum
Ndewo, m Van . Sy mo ya -eme ka nkasi banyere gburugburu ebe obibi. N'ihi ya, ọ kpọọrọ literatur2 kwe nkwa na a ga- agụ nke mere na mgbe e mesịrị sy sy ndibuana ihe ọmụma na -agụ na-atọ ọchị sy . Akụkọ bụ ihe isi agwa inwale aka o Rgopoker.com Bandar Judi Poker Situs Poker Online Terpercayanye ọrụ ugbo na greening a dara ogbenye n'ime obodo ndị na e otiti site na okochi . Site n'ike nke ihe na nwunye nke igba Richie
Sy biko nyere otú teknik2 mere ka ada n'ala n'ime tụụrụ / na-arụpụta . Ọnọdụ akụkọ ala odude ke larịị ( kira2 ky na NTT daerah2 mere ...) , ma n'ihi otu tụụrụ mgbanwoe na okochi wee agbatịwo afọ . Nzọụkwụ mbụ bụ isi agwa ga-ahụ isi iyi nke mmiri.
Kira2 ihe ya na-esote nzọụkwụ mgbe mmiri na iyi a nwetara ? Ị na -eme ka ala -aghọ tụụrụ ma ọ bụ e nwere ihe ọzọ na-aghaghị mere akpa?
Mgbe ahụ, otú e si mee ka azụ ndị ọmụmụ nke ala ? Nso orụk fatịlaịza kwesịrị a ga-eji ?
Ekem tanaman2 nso ke akpa ini , ha ga-enwe ga- kụrụ n'ala ? Sy ịnụ ụfọdụ ụdị kacang2an nwere ike inyere ifatilaiza ala , Ko ga ?
Biko ndụmọdụ m kwesịrị ịgụ akwụkwọ ( akwụkwọ ma ọ bụ na web ) Dị ka ihe nkwado nke a na-atọ ọchị mbụk .
Biko, nyere N'ihi ekerịta ozi na ahụmịhe kachasịEkele ...
Ndo ma ọ bụrụ na ihe ọjọọInspirasi Kesetiaan bersama Cap Kaki Tiga ebe ...View bbcodeBanditz - 20/03/2009 11:09 m# 2ane amaja bụghị ma ọ bụrụ na ị maara na ihe banyere ala ahụ gedhe okwu, ane taunya -eme ka usoro mgbasa ozi na akụwa
chere master2nya onye dere ka ihe ọmụmaView bbcodebosjankrick - 20/03/2009 11:25 m# 3see okwu :Mbụ site Banditzane amaja bụghị ma ọ bụrụ na ị maara na ihe banyere ala ahụ gedhe okwu, ane taunya -eme ka usoro mgbasa ozi na akụwa
chere master2nya onye dere ka ihe ọmụma
Echere m na kang C - lo nwere ike njawab , mngkn enye blum ụrọ ya !
Ma, dị ka kacang2an e benernya ane ... coz .. klo ane obodo ndị ọrụ ubi ubi osikapa okokụre ... truz dilanjutin na nanam kacang2an
Na nkeji oge ... tuk azụ na oge osikapa akukuView bbcode7apratampan_kw1 - 20/03/2009 11:31 m# 4assiiiikkkkkk ,,, ,,, na e nwere ọhụrụ trit ....
n'okpuru tau ​​ane gan eleghị anya ....View bbcodemumet mbundet - 20/03/2009 11:40 m# 5na compost lured iyi n'elu elu , ala aSituPoker.com JUDI POKER, AGEN POKER, AGEN JUDI POKER ONLINE INDONESIA BANK LOKAL da n'ihi na e nweghị / enweghị ezi microorganisms nwere ike parse na ịgbanwe nri ....see okwu :Mbụ site jendol13Bokashi ( Organic atawo GA ọgaranya isi ndu )
Bokashi compost na- emepụta si gbaa ụka usoro ma ọ bụ gbaa ụka nke organic okwunkà na ụzụ na EM4 ( n'ụzọ dị irè Microorganisms 4 ). EM4 uru n'iji nka na ụzụ bụorganic fatịlaịza ( compost ) ga- eme na a dịtụ mkpirikpi oge tụnyere aka ot usoro .EM4 onwe ya dere Azotobacter sp. , Lactobacillus sp. , Yist , photosynthetic nje bacteria na- nacellulose decomposing dịkwa ka usoro ha . Akụrụngwa maka imewe nke bokashi nwere ike nweta mfena ugbo ala , dị ka ahịhịa , ahịhịa, na osisi , akụ , igbogbo ọka ,nri ma ọ bụ sawdust . Ma, ihe na- kacha mee ihe maka bokashibụ bran n'ihi na ọ na e dere ihe ndị magburu onwe ha nri nke microorganisms .
na-eme ka bokashiBokashi Ndinam ihe ( ahịhịa , ahịhịa, ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ nri , nri , wdg )ihe nwere ike Fikiere ma ọ bụ ka mmiri ( ọhụrụ ). E nwere ọtụtụ ụdị bokashi , ya bụ :
1. Bokashi ahịhịaAkụrụngwa ji :a. Ahihia ka 10 n'arọ ( nwekwara ike ahịhịa ma ọ bụ legume kụrụ ) nke na e gbupụrụ n'ime iberibe nke na ahịhịa ya enweghị banyere 5-10 cm .b. Ka 0,5 n'arọ nke bran na husk ka 10 n'arọ .c. EM4 ka abụọ tablespoons ( 10 ml ).d. Molasses ma ọ bụ sugar ka abụọ tablespoons ( 10 ml ) na mmiri dị ka mkpa.
SayaPoker.com Agen Judi Poker dan Domino Online Terpercaya Indonesia Esi rụpụta :a. Mbụ mere ihe ngwọta nke EM4 , molasses / sugar na mmiri na a ruru 1 ml : 1 ml : 1 l mmiri.b. Akụrụngwa ahịhịa , husk na bran agwakọta evenly n'elu n'ala akọrọ .c. Ọzọkwa onwunwe EM4 ngwọta mmiri ji nwayọọ nwayọọ na na nke nta nke nta na-etolite a mgwakota agwa .Ọ bụrụ na ndị na- mgwakota agwa hiwere site n'aka clenched , mgbe ahụ, e nweghị mmiri na-abịa nke mgwakota agwa .Ntre ke ini aka tọhapụrụ mgbe nd o - ibugo onu na mgwakota agwa ( 30 % mmiri ọdịnaya ).d. Na-esote batter e mere n'ime ná mkputamkpu ala ka elu dị ka 15-20 cm . Ná mkputamkpu ala ya na- ahụ kpuchie na burlap sacks nke 3-4 ụbọchị . Mgbe Usoro ihe okpomọkụ a na aka iso ke ufọt 40-50 Celsius C. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ nke ihe onwunwe karịa 50 Celsius C , mgbe ahụ, nchupu mkpuchi na- emeghe ma na tumbled akọrọ mgwakota agwa Efrata ma ná mkputamkpu ala ya emechi .e . Mgbe ụbọchị anọ burlap nchupu emeghe. Na-eme ka bokashi bokashi bụ ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ihe na- ọma fermented . Njirimara ndị bokashi ga- ekpuchiri ebe na-acha ọcha ero ma na-esi isi ụtọ . Ka ọ dịgodị, ma ọ bụ
rụ na ndedehe -esi ísì eme bokashi , bokashi ada ada ahụ rụpụta .f. Bokashi ama otú a ga- eji ya ozugbo. Ọ bụrụ na bokashi chọrọ ka a zọpụta mbụ , mgbe ahụ bokashi kwesịrị Fikiere akpa ikuku ụzọ n'ala nkụ . Mgbe ihicha bokashi nwere ike juru n'ọnụ ke akpa rọba .
ojiji :Bokashi bụ ezigbo mma hay ji mulch weathering n'ibu -anọgidendị ọzọ organic ihe na ugbo ala. Bokashi ahịhịa bụkwa ihe kwesịrị ekwesị imeke paddy n'ubi.
Posted by Juragan Channel at 6:23 AM